Milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea oo xiiseynaya saxiixa Harry Maguire – Gool FM
(London) 10 Maajo 2022. Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa lagu sheegay maanta oo Talaado ah, waxa uu doonayo inuu sameeyo milkiilaha cusub kooxda Chelsea ee Todd Boehly, isla marka uu kooxda la wareego.
Waxaa la filayaa in Todd Boehly uu mustaqbalka dhow la wareegi doono lahaanshaha Chelsea, taasoo soo afjareysa 19-sano oo Roman Abramovich uu gacanta ku haayay milkiyada kooxda.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee “Daily Mail” Boehly waxa uu doonayaa in uu dib ugu dhiso kooxda Chelsea xiddigo laf dhabar u ah xulka qaranka England.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Todd Boehly uu doonayay inuu la soo saxiixdo daafaca kooxda Manchester United ee Harry Maguire, ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham Declan Rice, iyo weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane.
Warbixinta ayaa waxay tilmaamtay in Chelsea ay u baahan tahay in lagu xoojiyo booska seddexda ciyaaryahan, iyada oo xiisaha Harry Maguire uu yimid maadaama labada ciyaaryahan ee Antonio Rüdiger iyo Andreas Christensen ay ku dhaw yihiin inay ka tagaan kooxda suuqa xagaaga, kaddib marka uu dhammaado qandaraaskooda.
Sidoo kale kooxda reer London ee Chelsea ayaa u baahan saxiixa xiddig si wanaagsan kaga ciyaari kara khadka dhexe, sababa la xiriira inaan la hubin mustaqbalka ciyaaryahanka reer Talyaani ee Jorginho, taasoo Blues ku riixeysa soo xero galinta xiddiga West Ham ee Declan Rice.
Dhanka kale saxiixa Harry Kane, milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea wuxuu aaminsan yahay sida lagu sheegay warbixinta xiddiga reer Belgiam ee Romelu Lukaku, uusan ilaa hadda la heshiin Chelsea, sidaas darted Kane ayuu u arkaa mid ku haboon in booskiisa lagu badelo, maadaama uu halis yahay in badana la qabsaday jawiga garoomada Ingiriiska.
“Liverpool waxay leedahay taariikh wanaagsan... laakin” – Rodri